Letaman mould himself into what he admonishes others to be.
Thus well-controlled he can control others.
It is extremely difficult indeed to control
one's own self.
သူတစ်ပါးကို အောင်ဖြင်ဖြစ်ထွန်းအောင် ထိန်းကျောင်းတဲ့ အခါမှာ မိမိကိုယ်ကိုလည်း စံပြုထိုက်အောင်လုပ်ပြပါ ။ တစ်ခြားသောသူကို ထိန်ကျောင်းပေးရသည်ထက် မိမိကိုယ်ကို ထိန်ကျောင်းရခြင်းက အစများစွာခက်ခဲပါတယ်။ ။ (ဓမ္မပဒ ၁၅၉)
Posted by laminashin at 4:43 AM No comments:
Labels: ဘာသာရေး, မူလစာမျက်နှာ
(နှလုံးသာ ဒိုင်ယာယီ) လေးပါ
မကြိုးစားပါနဲ့တော့.............. (နှလုံးသား ဒိုင်ယာယီ)
သူကထားခဲ့တယ်ဆိုရင် နေရဲတဲ့ သတ္တိတော့ရှိသင့်တယ်
သူကမုန်းခဲ့တယ်ဆိုရင် မေ့ရဲတဲ့ သတ္တိတော့ရှိသင့်တယ်
သူကပြောင်းလွဲသွားတယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကကျေနပ်ပေးနိုင်တဲ့ သတ္တိတွေတော့ ရှိသင့်ပါတယ်။
တစ်ဖတ်သတ် စွဲလမ်းမှုတွေနဲ့ နေ့တွေကို ရှည်ကြာစွာမဖြတ်သန်းပါနဲ့ ........................
Posted by laminashin at 4:23 AM No comments:
Labels: ကဗျာများ, မူလစာမျက်နှာ
အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော
The self is the master of the self.
Who else can that master be?
With the self fully subdued, one obtains the sublime refuge which is very difficult to achieve.
မိမိသည်သာလျှင် ကိုယ်ကွယ်ရာ ဖြစ်ပေသည်။
မိမိမှ တစ်ပါး အခြားအားထားရာ ရှိတော့မည်နည်း။
ကိုယ့်ကိုယ့်ကို ယုံကြည့်ခြင်းသည် ရရှိဖို့ရန်ခက်ခဲ့သော
အောင်မြင်မှုတွေကို အံ့အားသင့်လောက်အောင် မိမိမှရရှိမည်ဖြစ်ပေသည် ။
Posted by laminashin at 3:52 AM 1 comment:
အချစ်နဲ့မေတ္တာရဲ့ ကြားကကွဲပြားခြားမှုကို တို့အားလုံး သဘောပေါက် နားလည်သင့်ပါတယ်။
အချစ်ဆိုတာကတော့ လိုချင်မှု တောင်းတမှု စိုးရိမ် ကြောင့်ကြ ပူပန်မှုတွေနဲ့ ရပ်တည်နေတယ် ။
တို့အားလုံးရဲ့စိတ်က အချစ်ဆိုတဲ့အရာကို ခံစားနေမယ်ဆိုရင်..........
ငါတို့ရဲ့ စိတ်တွေမှာ လိုချင်မှု တောင်းတမှု စိုးရိမ်ကြောင့်ကြပူပန်မှုတွေ ရောက်ရှိလာပါမယ်။
ဒီအချစ်ဆိုတာရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်လေးကတော့ မိမိလိုချင်သော
တစ်စုံတစ်ခု တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်လိုခြင်းပါပဲ………………။
ဒါပေမယ့် မေတ္တာတရားရဲ့ ဆိုလိုရင်းကတော့ ဖြူစင်သောမေတ္တာ အေးမျှကြည်လင်တည်ငြိမ်မှု စစ်မှန်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးစွမ်းခြင်းပါပဲ…………
သတ္တ၀ါတွေအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာ တို့ရဲ့မေတ္တာတရားတွေဖြန့်ဝေထားမယ်ဆိုရင် တို့ရဲ့စိတ်မှာ အေးချမ်း တည်ငြိမ်စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကို
ခံစားရမှာသေချာပါတယ်……. မေတ္တာတရား၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်လေးကတော့ အားလုံးသော သတ္တ၀ါတွေ
အချစ်ဆိုတာ ပူပြင်းတဲ့ မီးလုံးကြီးကို ရင်ထဲမှာ ပိုက်ထားရသလိုပါ……..။
မေတ္တာဆိုတာ အေးမျှတဲ့ ရေလုံးကြီးကို ရင်ထဲမှာ ပိုက်ထားရသလိုပါ………….။
We shout know the difference between love and loving kindness.
Love mean greed, yearn, anxiety and grief.
When our mind is feeling on the object of love, our mind become greed, yearn, anxiety and grief
The purpose of love is to achieve we need to something or someone.
But loving kindness means compassionate or calm, tranquil and real happiness.
If we put loving kindness for all being, in our mind will be fell calm, tranquil and real happiness.
This purpose of loving kindness is to attain real happiness for all being.
So the love is worried or anxious about something. The Love can give worries.
Or love is worrying.
Loving kindness distribute calm, tranquil and real happiness.
Posted by laminashin at 9:15 AM 1 comment:
ဗုဒ္ဓတရားနှင့် အလ္လာန်ရဲ့အမိန့်တော် နှိုင်းယှဉ်မှု
ဘာသာဝါဒ မတူကြ၍ လောကအတွင်း ငြင်းခုံခြင်းဖြင့် ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကုန်ကြမယ်။ ၀ါဒအယူ မှားခဲ့မူကား ဆူဆူဗုဒ္ဓကယ်မရသည့် လေးဝပါယ်ဘုံ ဘေးတွေ့ကြုံလိမ့် စေ့စုံဥာဏ်ဖြင့် မျှော်ထောက်ချင့်ကာ ..........
လွဲပုံစိတ်ချ မယုံကြလင့် ဒိဋ္ဌကျင့်ကြံ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ဖြင့် မှားမှန်ကောင်းဆိုး သိအောင်ကြိုးယူ ၀ါဒအယူစစ်တမ်းတည်းလို့ ဗုဒ္ဓကဟောကြားခဲလေတယ် ...................................ဗုဒ္ဓက သူ့အယူဝါဒမှန်တယ်လို့ဘယ်သောအခါကမှ မပြောခဲ့သလို ၀င်လာပါလို့လည်း မပြောခဲ့ပါ။ ကိုယ်ပိုင် အသိဖြင့်လေ့လာကြည့်ပါ ကျင့်ကြံကြည့်ပါ မှန်တယ်ဆိုမှ ဗုဒ္ဓအယူဝါဒကို လက်ခံပါလို့ဟောကြားထားခဲ့တယ်လေ။
မြန်မာပြည်က မြန်မာလူမျိူးတွေဟာ ဗုဒ္ဓတရာတွေနဲ့အေးချမ်းနေတာကို စစ်ဘေးတွေသင့်ရောက်လာဖို့ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဆောင်ပါနဲ့ပြောကြာလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကအထက်အရာရှိကြီးများ
ကိုယ်တည်းတစ်ယောက်ကောက်ကျိူးရဖို့အရေး ဗုဒ္ဓတရားတွေကွယ်ပျောက်ဖို့ရာ ဘယ်တော့မှမလိုပါနဲ့ ....................................
do not believe in that as truth to which you have become attached by habit;
After observation and analysis, when it agrees with reason and is conducive to the good and gain of one and all,
OIC ဆိုသော ဘာသာတွေရဲ့တရားက ဒီလိုဆိုတာမှတ်ထားကြပါ
အစ်လာန်ဘာသာဝင်မှ အပဖြစ်သော ဘာသာဝင်အားလုံးကိုချေမှုန်းပစ်တော်မူပါ။
ထိုဘာသာဝင်များ၏ အစည်းအရုံးများကို ဖြိုခွဲပစ်တော်မူပါ။
ထိုဘာသာဝင်များ၏ အောက်ချေများကို ရိုက်ချိူးပစ်တော်မူပါ။
ထိုဘာသာဝင်များ၏ မြို့ရွာများကို မြေလှန်ပစ်တော်မူပါ။
အလ္လာန်ဘုရားသခင်၏ အမိန့်တော်ကို မနာခံသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများ အခြားဘာသာဝင်များ
အားလုံးကို မည်သည့်အခါမှ နာလှန်မထူနိုင်အောင် ဘေးရန်အန္တရာယ်များ ကပ်ဆိုးများ ဥပါဒ်များကို ချပေးတော်မူပါ ။ '' ကဲဒါတရားတဲ့
ဒီတရားနဲ့အညီလုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာ သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် ။ စရိုတ်ကြမ်းသောသူအတွက် အသက်တစ်ချောင်းဟာ အလကားပါ ဒါကြောင့် အသေခံဗုံခွဲရဲတယ်ဆိုတာ သိသင့်ပါသည်။ မြန်မာပြည်ကို ဗုံးမိုးတွေမရွာဘူးလို့ ဘယ်လိုမှပြောလို့မရပါဘူး သူတို့ဘာသာဝင်တွေမှာ တရားမရှိ ကိုယ်ကျင့်တရားမရှိတဲ့အတွက် မြန်မာပြည်ကို ဖျက်ဖို့ရာ သူတို့အတွက် မခက်ခဲ့ပါ။ OIC ခေါ်တဲ့သူတို့ဘာသာဝင်တွေရဲ့ အခံတံတိုင်းကြီး မရောက်သေးတာတောင် ဒီလို ပြဿနာတွေဖြစ်လာတာ OIC သာရောက်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ မတွေးတတ်လေယောလား...........
ဒီလို အထက်လူကြီး အစိုးရ အုပ်ချူပ်မှုမျိူး စိတ်ဓါတ်နှင့်သာ လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုပါက ဘယ်သောအခါမှ အေးချမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ...........
ပြည်သူ.ပြည်သားတွေ အမြဲတမ်း အနစ်နာခံရမယ်သာ မှန်ပေသည်.............................ယခု တရာဥပဒေသည် သူတို့ကို ကာကွယ်ပေးယုံသက်သက်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။
ပြည်သူပြည်သားတွေ နစ်နာခြင်းတွေကို အလေးမထားသော ဥပဒေသာဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားလိုက်ရပါသည်......
Posted by laminashin at 8:32 AM No comments:
မင်းရဲ့ ရိုးသားတဲ့ စိတ်ထား
Posted by laminashin at 9:20 PM2comments:
Posted by laminashin at 10:34 AM3comments:
Letaman mould himself into what he admonishes others to be. Thus well-controlled he can control others. It is extremely dif...
လမင်းကြောင့် အားလုံးပျော်ရွှင်ခြင်းတွေရတယ် လမင်းကြောင့် အေးမြခြင်းတွေရတယ်ဆိုရင် လမင်းကြောင့် စိတ်ငြိမ်းအေးမှုကိုရတယ်ဆိုရင် ကျနော်ကလမင်းသခင်ပါ လမင်းလောက် အေးမျှမှုတွေ ပျော်ရွှင်မှုတွေမပေးနိုင်ဘူးဆိုတောင်လမင်းထက်တော့မနည်းစေရပါဘူး ။ ဒီဘလော့လေးကြောင့် အားလုံးပျော်ရွှင်ကြမယ်လို့ ယုံကြည်နေပါမယ် ။ အားလုံးလည်း လမင်းသခင်ပေးလာမယ့်အေးမြမှု ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ နေ့ရက်တွေကို ပျော်ရွှင်စာဖြတ်သန်းကြမယ်........။
Stay Home Day 5; The Truth
မန္တလေးရောက် .အောက်ပိုင်းသားနှင့် ဒေသိယစကား
<!-weather in mandalay, myanmar on your site - html code - weatherforecastmap.com -- >